Gourmet ngwaahịa si nile Spain. Spanish gastronomy nke ga-eme ka ị hụ ya n'anya karịa nke ọ bụla ọzọ. Ndị ọrụ Iberian hams, Virgin Extra Virgin Olive Oil of Gourmet Quality, Chiiz nke a na-eme n'obodo nta, sweets, mmanya na mmanya na ihe ndị ọzọ!
E Dere 15 January, 2019 15 January, 2019 By HBcomment
Ke obodo nke Cedrillas turolense banyere 35 kilomita site na isi obodo Teruel, ala sara site River Mijares, ndị pụrụ iche na Teruel gwọrọ ham na ndị ọzọ na anụ ezi dị n'ógbè ahụ. Jamones el Ferial, akara ngosi nke Sierra de Cedrillas SL, emebeghị ka ndị ọzọ na-emepụta ihe n'ógbè ahụ Continue Reading
E Dere 9 January, 2019 By HBcomment
Necker Island bụ aha nke agwaetiti dị iche iche bụ Richard Branson, onye bi na Virgin Islands, ebe Wednesday Hurricane Irma gara aga na-ebibi ihe niile na ụzọ ya. Ekwesiri ighota na Irma, ihe ojoo 5 nke 5, bu otu n'ime Continue Reading